Mayelana nathi - Qingdao Evergrowing Cage Co., Ltd
Evergrowing kuyinto umphakeli ehamba phambili elintantayo izinhlanzi ezinkanjini izinhlanzi umlimi maphakathi nezwe amanzi sogu lolwandle. Thina uzinikezele ukuklama futhi ahlinzeke izinga okusezingeni izinhlanzi ezinkanjini wanelisa izidingo zakho kanye nezimo zendawo.
Ukudoba ngokweqile kuholele Ukuwohloka abalulekile zasendle kwesibalo sezinhlanzi. Fish yezinyoni ukulima ukhona njengenhlangano isixazululo UKUVIKELEKA KWEMVELO kule nkinga. Evergrowing iye ukusebenza ekuthuthukisweni, ukwakhiwa kanye yokuthengisa ezahlukene elintantayo izinhlanzi ezinkanjini. I ezinkanjini thina ukunikezela uzobe ehambisana nezidingo zakho ethize. Uhla yethu ihlanganisa amayunithi amancane ekahle umsebenzi ucwaningo noma ukukhiqizwa gazinga kuze giant isiyingi HDPE izinhlanzi ezinkanjini uyakwazi ukusebenza ezimweni wasolwandle.
Le nkampani iye attained futhi uyaqhubeka kwi liyanda izinhlanzi ezinkanjini lokuveza.
Nweba khona emakethe futhi uvule ezinye nekhono emakethe emhlabeni wonke.
Phakathi kweminyaka yentuthuko, sekwakhiwe eduze ubudlelwano ubambisane China Ocean University, Fisheries Institute futhi abanolwazi aquaculture ososayensi emhlabeni wonke. Singabantu umphakeli izixazululo kanye nezinsizakalo ukuze sithuthukise inzuzo yakho.
Evergrowing kuyinto umlingani wakho ekahle ekuthuthukiseni izinhlanzi yezinyoni ukulima phrojekthi.
Wayenesifiso Sokuvelela futhi eside, Nezimo futhi ephelele
Ukuhlinzeka imishini engcono ukulondoloza izindleko futhi sithuthukise ukukhiqizwa
Foster ibhizinisi imvelo nasekusebenzelaneni nemvelo wemfanelo